FISEMARE: Iharan’ny fandroahana tsy misy fanazavana ireo delege sendikaly. | Canalnews Madagascar
UMMI MADAGASCAR: Nizara rano fisotro madio maimaim-poana.
OMACI: Hitsangana eto Madagasikara ny tranom-pamokarana sarimihetsika ana vahiny.
FARITRA ANALAMANGA : Eny amin’ny fokontany no hiainga ny ady amin’ny pesta.
CENI: Hanao fanamarinana ny lisitry ny mpifidy.
FMBB : Hampiantrano ny lalao CACC ny firenena Malagasy
EVOLUTIVE UNIVERSITY: Sady voafehy ny tenim-pirenena hafa no mahazo diplaoma.
YOUNG PROGRESS ASSOCIATION: Matsiro noho ny akoho ny papelika.
ECLOSIA: Misahana sehatra maro hampiroboroboana ny fambolena sy fiompiana.
CHAMPIONNAT NATIONAL SPORTS PARALYMPIQUES : Ho fampiatiana ireo olona tra-pahasembanana
TRANO PRINTIM-PIRENENA: 80 % ny kaominina hananany trosa avokoa.
Home A LA UNE FISEMARE: Iharan’ny fandroahana tsy misy fanazavana ireo delege sendikaly.
A LA UNEACTUALITESOCIALTravail
FISEMARE: Iharan’ny fandroahana tsy misy fanazavana ireo delege sendikaly.
By Nirinasept 10, 2017, 10:24 0
Delege sendikaly fito no efa niharan’ny fandroahana tsy misy fanazavana ho an’ny fikambanan’ny sendikan’ny mpiasa (FISEMARE). Nambaran’ny Sekretera Jeneraly lefitry ny fikambanana, Jean Raphael MANANANDRO fa henjehin’ny mpampiasa fatratra ireo solontenan’ny mpiasa noho ny andraikitra sahanin’izy ireo dia hisian’ny filaminana eny anivon’ny orinasa.
Ho fiarovana hatrany ny zon’ny delege sendikaly , nijoro ara-dalana ny fikambanan’izy ireo. Mitaky ny hijerena akaiky ireo delege iharan’ny tsindry hazo lena ny fikambanana ADPCE.
Ankoatra ny fiarovana ny zon’ny mpiasa, nanantanteraka fanomezan-dra maimaim-poana ny FISEMARE sy ny ADPCE ny 08 Septambra 2017.
Previous PostDEPIOTE JEAN NICOLAS RANDRIANASOLO: Vao maika nampikoroso fahana ny firenena ny fanoloana ministra. Next PostCROIX ROUGE MALAGASY: Ny fanalefahana ny voka-dratsy ateraky ny loza voajanahary.
ONIVERSITE E-media : Mahazo Licence ao anatin’ny 18 volana .
SALON DES ETUDES SUPERIEURES : Manana safidy maro ny mpianatra.
ONIVERSITE GSI: Manampy ny mpianatra amin’ny alalan’ny vatsim-pianarana.
ONIVERSITE HPI-MASCA: Tsy miandry fahavitan’ny taom-pianarana vao manao “stage”.